'ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းကို စော်ကားတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေ ပြောလာတာကိုတော့ အစ်မအနေနဲ့ သည်းမခံနိုင်ဘူး' သ? - Yangon Media Group
‘ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းကို စော်ကားတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေ ပြောလာတာကိုတော့ အစ်မအနေနဲ့ သည်းမခံနိုင်ဘူး’ သ?
သရုပ်ဆောင် ခင်ဇာခြည်ကျော်ဟာ ဒါရိုက်တာ ရွှေရေးထင်ထင် ရိုက်ကူးတဲ့ ‘ရာဇဝင်ရိုင်းခဲ့သည်’ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ သရုပ်ဆောင် ဇေရဲထက်နှင့် တွဲဖက်သရုပ်ဆောင် ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်အများစုရဲ့ ဝေဖန်မှုကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း ခင်ဇာခြည်ကျော်က ပြန်လည်ဖြေ ရှင်းထားတာကိုတွေ့ရပြီး သားနဲ့ သမီးကြောင့် ဝေဖန်မှုတွေကို ပြန်လည်ရှင်းပြခဲ့တာပါ ဆိုပါတယ်။
”ဒီဇာတ်ကားလေးက ခေတ်နဲ့ညီတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးလည်းဖြစ်တယ်။ ဇာတ်ကားထဲမှာလည်းဆိုးဆိုးရွားရွားတွေမပါပါဘူး။ လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေပဲလေ။ အစ်မကိုကျ တော့လည်း ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးက အေးဆေးနေတတ်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ လက်ခံထားတာဆိုတော့ ဒီလိုမျိုး ကာရိုက်တာမျိုးကို မြင်တွေ့လိုက် ရတဲ့အချိန်မှာ ဝေဖန်ကြတာ ပေါ့ နော်”လို့ ခင်ဇာခြည်ကျော်က ဆို ပါတယ်။ အခုလိုဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး သည်းခံခဲ့ပေမယ့် တချို့သောဝေ ဖန်မှုတွေဟာ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းအရ စော်ကားခံရသည့် အနေအထားမျိုး ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် အခုလို ပြန်လည်ဖြေရှင်းရခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။
”ဝေဖန်တာတွေကိုဝင်ကြည့်တဲ့အခါမှာ တချို့သောမန့်တွေက အစ်မရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းကို ထိခိုက် အောင်ပြောတဲ့သူတွေလည်း ရှိလာတယ်။ အဲဒီအခါကျတော့ ဝေဖန်ခံရတဲ့ ပထမတုန်းကတော့ အစ်မရှင်းပြ ဖို့မစဉ်းစားထားဘူး။ နောက်ပိုင်း ခုန ပြောသလိုပေါ့နော်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းကိုစော်ကားတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေ ပြောလာတာကိုတော့ အစ်မအနေနဲ့ သည်းမခံနိုင်ဘူးလေ နော်။ အဲဒါကြောင့် အစ်မပြန်ရှင်းခဲ့တာပါ”ဟု သူမက ဆက်လက် ပြောသည်။
အဆိုပါဇာတ်ဝင်ခန်းရိုက်ကူးချိန်တွင် ရိုက်ကွင်းပေါ်တွင်သာရိုက် ကူးခြင်းဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး အောင်မြင်ရန်အတွက် အနုပညာရှင်များမှ ကြိုးစားသရုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟုလည်း ပြောပြခဲ့သည်။ ”အစ်မတို့ အနုပညာရှင်တွေဆိုတာက ကိုယ်တာဝန်ယူထားရတဲ့ ကာရိုက်တာကို သရုပ်ဆောင်တာ ပေါ့နော်။ အဲဒီလိုမျိုးသရုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကလည်း ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာ သရုပ်ဆောင်တာ ရိုက်ကွင်းဆို တာကလည်း ဒါရိုက်တာရှိမယ်။တခြားသော သရုပ်ဆောင်တွေရှိ မယ်။ စက်အဖွဲ့သားတွေရှိမယ်။နောက်မီဒီယာက လာသတင်းယူတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။ အစ်မက တစ်ယောက်တည်းသမားမဟုတ် ဘူးလေနော်။ အစ်မမှာ သားတွေ၊ သမီးတွေရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့အမြင်မှာ အစ်မ ဒီလိုမျိုးအပြောခံရတာက မဖြစ်ချင်ဘူး။ အဲဒါကြောင့် အစ်မ ပြန်ဖြေရှင်းလိုက်တာပါ”လို့ သရုပ် ဆောင် ခင်ဇာခြည်ကျော်က ဆက်လက်ပြောခဲ့ပါတယ်။
သီးသန့် လက်ထပ်ပွဲ လုပ်ပြီး မင်္ဂလာဆောင်ခဲ့ကြတဲ့ မင်းသား လီဒုံဂန်းနဲ့ မင်းသမီး ဂျိုယွန်ဟီးတိ??
ထိုင်းနိုင်ငံမှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဝယ်ယူသုံးစွဲနေရသော မြဝတီမြို့၌ ဒီဇင်ဘာလတွင် မြန်မာ့လျှပ်စစ်မီး စတင် ဖြန့်ဖြူးပေးတော့မည်